I-China Small Precision Spraying Machine for Scientific Research yi-Ultrasonic Spray Atomization Equipment Equipment Ukwakha neFektri | Qianrong
Umshini Wokufafaza Omncane Wokucwaninga Kwezesayensi yi-Ultrasonic Spray Atomization Equipment
Imishini ye-Ultrasonic spray atomization ingumshini omncane wokufafaza ngokunemba ofanele ucwaningo lwesayensi. Yamukela ubuchwepheshe bokufafaza be-QRsonic ultrasonic bokufana okuphezulu kwe-sub-micron ne-nano-level thin film coating. Isetshenziswa kabanzi kumaseli kaphethiloli, kumaseli elanga, nasezingutsheni zengilazi. , Amasekethe kagesi nezinye izimboni.
I-Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd. ingumkhiqizi wobuchwepheshe ocwaningweni oluzimele nentuthuko, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwezakhi zamandla ezinamandla amakhulu ze-ultrasonic namasethi aphelele wemishini yohlelo lokusebenza, egxile kuzinhlelo zokusebenza zamandla we-non-standardized. Izicelo eziyinhloko ezithintekayo yilezi: i-ultrasonic atomization spraying, i-ultrasonic indium coating / tinning / dip welding, ukusika kwe-ultrasonic, i-ultrasonic high-temperature solution solution, i-ultrasonic dispersion / crushing / emulsification / homogenization, ipulasitiki ye-ultrasonic / i-welding yensimbi, i-ultrasonic spot welding / i-rolling Welding / ukuthungwa okungenamthungo, ukumiswa kwe-ultrasonic, njll.
Imishini yokufafaza i-Ultrasonic atomization: sebenzisa amandla wamagagasi e-ultrasonic ukwephula amanzi noma uketshezi ukwakha izinhlayiya ezincane zama-microns amaningi kuya kuma-microns angaphezu kuka-100 ngosayizi wokufeza ukufinyiswa komoya, i-granulation engamanzi, ukuxubana, ukukhuthazwa kokuphendula kwamakhemikhali, ukufafaza nensimbi ukuncibilikisa abalandeli beSistimu nezinye izinjongo.
Ukufana okuphezulu: Ukufafaza kwe-Ultrasonic ubuchwepheshe bokufafaza obusebenza kahle kwezimboni, okusetshenziselwa ukufana okuphezulu kwe-sub-micron ne-nano-scale scale thin film.
Ukulondolozwa kwempahla nokuvikelwa kwemvelo: Njengoba isifutho esinejubane eliphansi ngaphandle kwengcindezi kulula ukusilawula, futhi amaconsi awela ku-substrate esikhundleni sokubuyela emuva ku-substrate, ingaqinisekisa ukwehliswa okukhulu kwenani le-overspray, longa izinto eziningi nokunciphisa ukungcola kwezemvelo. Izinga lokusetshenziswa kokumboza lokufafaza kwe-ultrasonic liphindwe izikhathi ezingaphezu kwezingu-4 zokufafaza kwendabuko okubili uketshezi.
Ukulawulwa okuphezulu: Lapho kudingeka ukugeleza okuphansi kakhulu, umbhobho uyinto efiseleka kakhulu. Lapho izinhlayiya ezifuthwayo zimisiwe, zinezinzuzo ezihlukile. Ngomphumela we-ultrasonic wombhobho uqobo, izinhlayiya zigcinwa zimisiwe ngendlela efanayo phakathi nayo yonke inqubo yokufafaza ukuqinisekisa ukuthi izinhlayiya ezisebenzayo zisakazeka ngokulinganayo kusendlalelo esincanyana.
Ukusebenza kahle okuphezulu nokonga amandla: uketshezi ludluliselwa ekhanda lesifutho ngamandla adonsela phansi noma ipompo elinengcindezi encane futhi lifinyelela i-atomization eqhubekayo noma eyemuva, akukho ukuvinjelwa, akukho ukugqokwa, akukho msindo, akukho ngcindezi, akukho zingxenye ezihambayo, awekho amanzi okupholisa adingekayo ngesikhathi se-atomization, kanye nokusetshenziswa kwamandla okuphansi, Imishini ilula, izinga lokwehluleka liphansi, umbhobho we-ultrasonic unomsebenzi wokuzihlanza, futhi ukugcinwa kwansuku zonke kumahhala.
Isetshenziswa kabanzi: Imishini yokufafaza i-Ultrasonic isetshenziswa kakhulu kumaseli kaphethiloli, amaseli amancane we-photovoltaic, amafilimu amancane elanga, amaseli elanga le-perovskite, amaseli elanga, ukugqokiswa kwe-graphene, amaseli we-silicon photovoltaic, ukugqoka ingilazi, amasekethe kagesi nezinye izimboni. Umbhobho ungasetshenziselwa izixazululo ezahlukahlukene, indle, uketshezi lwamakhemikhali, kanye noketshezi olunamafutha nakho kungahle kwenziwe nge-athomu.
Langaphambilini I-3000W Hot-melt Sealing Welding ye-Plastic End Caps ye-Folding Filter Welding Production Line
Olandelayo: I-Ultrasonic Metal Powder Atomization Technology ye-Tin Powder Ngama-High Frequency Ultra
30Khz 700w Ultrasonic Vibratior ye-Ultrasonic ...
High Frequency 40Khz Vibration Ultrasonic Rubbe ...
RFID Smart Card 60Khz High Frequency Ultrasonic ...
Ububanzi be-38mm 28Khz i-Ultrasonic Vibration Transd ...
40Khz ephathekayo Khanyisa Ultrasonic Cutting Kudivayisi
20Khz Ultrasonic Plastic Welding Machine for Th ...